02 Oktobra 2016
Famakafakana tononkalo "HONO", nosoratan'i Andrianarivo Honoré
Marina ve hono
fa misy vonololo
fa lasan-dreo Sinoa
ny kely sisa taniny?
Ny tanimbary lafo,
mandoro toy ny afo
ny fanjerana trano
fa miditra ny angano.
Ny ao Soamahamanina
mahita ny anganony
fa tsy mba azy intsony
ny sisa anjara taniny
Efapolo taona fotsiny
hono raha hoe azo havaozina.
Dia ho aiza ireo taranaka
fa izao dia efa lanaka
amin'ny asa saina
ny tany mitaraina
ny tapia toa noritraina
nefa toa hoe ala arovana
fa tafiditra ao,
ireo tsy fadiranovana.
Koa amidio ihany!
aripaho ny tany!
Amidio ihany koa
Mameno ny tanàna
ANDRIANARIVO Honoré Fitiavan-tanindrazana, tsy misy tsy milaza ho manana azy io raha mbola Malagasy. Ny fahamarinany na tsia no mbola tsy azo antoka fa araka ity tononkalon'i Andrianaivo Honoré ity, izay mitondra ny lohateny hoe "HONO" dia efa voavidy izany fitiavan-tanindrazana sy ny fitiavana ny mpiray tanin-drazana izany. Anjakan'ny vahiny isika ka zana-tany mandrakariva. Hevi-dehibe roa no maneho izany ao anaty asa soratra. Voalohany, fanamarinana ny tsy rariny miseho ao Soamahamanina ao; faharoa, fanamafisana fa resy ny Malagasy. Andao àry hojerentsika misesy ireo.
FANAMARINANA NY TSY RARINY
Raha vao manomboka mamaky isika dia fanontaniana avy hatrany no apetraky ny mpanoratra: "marina ve hono/ fa misy vonololo..." Izany hoe tsy mbola tena azony antoka, na ny nampiasainy ny "hono" fotsiny aza, taratra amin'izany fa efa reny siosio ny zava-misy ao an-toerana. Ankoatra ny fampiasana fehezanteny manontany dia mampiasa voambolana ahitana filaza masaka ihany koa ny mpanoratra: "vonololo", izany hoe tena efa-toe-javatra mihoatra ny tokony ho izy mihitsy no mitranga ao Soamahamanina ao.
Mbola eo ihany koa ny fitaterany izany tsy rariny miseho ao izany araka ny feo reny: "efapolo taona fotsiny hono raha ho azo havaozina". Misy fanesoana ihany koa eto raha tokony ho efapolo taona be izao dia nataony hoe "fotsiny". Tsy rariny tokoa, izany hoe ny mponina ankehitriny tsy hahita mangirana amin'ny taniny mihitsy, eny, hatramin'ny taranany koa aza. Rehefa tapitra mantsy ny fe-potoana, efa tapitra koa ny harena. Izay no mbola nanohizany azy fanontaniana hoe: "ho aiza ireo taranaka?"
Amin'izay tsy rariny izay ihany dia notanisain'ny mpanoratra avokoa ny mafy iainan'ireo mponina, dia ny faharavam-pananana izany: "ny tanimbary lafo", aiza intsony izany no hovolena ny vary foto-tsakafony? Ao ihany koa ny "fanjerana trano". Aiza ihany koa no hialoka? Ao amin'ny andininy faharoa no ahitana izany ary rima mifanjohy no anaingoan'ny mpanoratra azy ao:lafo/afo/trano/angano. Toa manamafy ny fitanisana zavatra mifanesy eto io rima mifanjohy io.
FANAMAFISANA FA RESY NY MALAGASY
Rehefa nohamarininy àry ireo rehetra reny siosio dia nohamafisiny fa resy tokoa isika satria ny lalàna velona no efa hitsahina noho ireo vahiny. Hoy izy: "Ny tapia toa noritraina/nefa toa hoe ala arovana ?". Izany hoe ny rehetra mahasarotiny indray no navela ho baranahiny. Fongana ny harena, "ritra".
Eo amin'ny andalana roa farany indray ny mpanoratra no tena manasongadina izany faharesentsika izany. Hoy izy: "mameno ny tanàna/nahazo fanjakana". Rima mifanjohy no namaranany azy, fampiasana antanatohatra ihany koa. Izany hoe rehefa fenon'izy ireo ny tanàna dia lasany amin'izay ny fanjakana. Tratra ny tanjony.
Eto am-pamaranana àry dia azo sintonina ho sora-pitolomana ity tononkalo ity. Mahafinaritra ny fomba nentin'ny mpanoratra nilaza ny zava-miseho, tsy avy hatrany dia nitompo teny fantatra fa niezaka nanamarina sy nanontany aloha izay vao nilaza fa resy tokoa isika.
Mpamakafaka: Heriarilala Andriamamonjy